३७६२ जना संक्रमित, ४८८ जना निको भए - Sarokar Khabar
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
सिन्धुली, २६ जेठ २०७७
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या तीन हजार ७६२ पुगेको छ । पछिल्लो पटक थप ३१४ सङ्क्रमित भएसंगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ३७६२ पुगेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले २९४ जना पुरुष र २० जना महिला गरी कुल ३१४ जनामा संक्रमितको संख्या थप कोरोना भएको हो । त्यसैगरी, थप २१ जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ । कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या ४८८ पुगेको छ । त्यसैगरी, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६
वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:१६